rural - Synonyms of rural | Antonyms of rural | Definition of rural | Example of rural | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for rural
Top 30 analogous words or synonyms for rural
ရှောက်စန်းမြို့ Shaoshan City administers two towns (镇/鎮) and six rural towns (乡/鄉) including:
Country rap Country rap သည် country ဂီတကို hip hop ပုံစံ rapping များရောနှောထားသော ကျော်ကြားလာသော မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး hick-hop (သို့) rural rap ဟုလည်းသိကြသည်။
မြန်မာခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ All the other seven minority groups are distributed into less than 35% as there are about 5% Chinese and Indians. Most of the ethnic groups are hill tribes and rural peoples. It is estimated that there are about 87% Buddhists (Theravada), 6%Christians,4% Muslims,1% Hindus and 2% others. The Christian population has membership from all ethnic national groups, however, over 90% Christians are made up by Kayins, Kachins, Chins, and Kayahs. There are very few Christians among
Western swing Western Swing ဂီတသည် အမေရိကန် country ဂီတ၏မျိုးခွဲ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၂၀ နောက်ပိုင်းတွင် အနောက်နှင့် တောင်ပိုင်းဒေသတွေထဲမှ အနောက်ဘက်ကြိုးတပ်တီးဝိုင်းများထဲတွင် စတင်ခဲ့သည်။ အကဂီတတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မြန်သောတီးလုံးများပါရှိသည်။ ၁၉၃၀နှင့် ၁၉၄၀အတောအတွင်း Texas, Oklahomaနှင့် carlifornia ရှိဟော်ခန်းနှင့် ကလပ်များ၌ ကြီးမားသောလူအုပ်များကို စွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ရွှေ့လျားမှုသည် Jazz ဂီတ၏ကြီးထွားမှုဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ gypsy jazzနှင့် ဆင်တူသည်။ ဂီတသည် rural, cowboy, polka,folk, Dixieland jazzနှင့် blues များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကြိုးတီးဝိုင်းများသည် ဒရမ်၊ saxophones, စန္ဒယားနှင့် စတီးဂီတာများပါဝင်သည်။ စတီးဂီတာများသည် ထူးခြားသော အသံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ big swing တီးဝိုင်းများကြောင့် western swing သည် ကွဲပြားသည်။ အနောက်တိုင်းတီးဝိုင်းများသည် တီးလုံး
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ၏ သားငါးကဏ္ဍဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ လယ်ယာနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ လယ်ယာနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဌာနနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန (၂)ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတော် ကောင်စီ၏ (၃/၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သဖြင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅) ရက်နေ့တွင် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကို သီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယခင်စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ် ၊ မေလ(၁) ရက်နေ့တွင် အရာထမ်း (၁၀) နေရာ ၊ အမှုထမ်း (၇၄) နေရာ ၊ စုစုပေါင်း ရာထူး (၈၄) နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ စီမံကိန်း နှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနကို ၁၉၉၇ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့၏ (၁၉/၉၇) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၆၇/၂၀၁၃) ဖြင့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ သဘောတူညီချက်အရ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Livestock and Fisheries) ကို မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development) အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။